ကိုရုပ်ဆိုး ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: August 2008
အဖြည့်ခံ နှလုံးသားတစ်ခုရဲ့ နာကျင်မှု
မောင်ရုပ်ဆိုး နှင့် အင်တာဗျူး (သို့) ဘလော့ဂ်များ၌ ...
ကိုရုပ်ဆိုး ဘလော့ဂ် ပရိုမိုးရှင်း
မြန်မာဝီကီ မှ ကိုရုပ်ဆိုးရဲ့ နောက်ထပ် ပို့စ်တစ်ခု
အမှတ်တမဲ့မှ အမှတ်တရသို့ ....
မြန်မာဝီကီ - ထန်းပင် အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ကျနော်ရဲ့ Buddhists' Terms Dictionary Blog လေး
လူပျိုကြီး အတွေး (သို့) လောဘ
ကျနော့အတွက် စိမ်းနေတဲ့ ကျနော့ဘလော့ဂ်
ကလေးငယ် ... မင်းရဲ့ ယုံကြည်ချက်အတိုင်း မင်း လျှောက်ပါ။ မင်း စိတ်ထဲ ငါ့ကို မုန်းတီးနေမယ် ဆိုရင်တောင် မင်း .... မမြင်ချင်လောက်အောင်၊ မုန်းတီးနေမယ် ဆိုရင်တောင် ... ငါ ကျေနပ်တယ်။ အဖြူရောင်ကို အရောင် စွန်းထင်စေခဲ့တဲ့ ငါ့ ကိုယ်ငါ နာကျည်းနေတယ်ဆိုတာ မင်းသိခဲ့ရင် ... ငါ ကျေနပ်တယ် ...။
ငါ, မင်းကို ချစ်ခဲ့တာ
ငါ, မင်းကို သံယောဇဉ်တွယ်ခဲ့တာ
ငါ, မင်းကို မြတ်နိုးခဲ့တာ
မင်း, ဘယ်လို ရှုမြင်ခဲ့သလဲ …
ဘယ် စံနှုံးကို မင်း အသုံးပြုခဲ့သလဲ …
ရာဂနဲ့ မင်းကို မပတ်သက်ခဲ့သလို
မင်း … ငယ်လွန်းပါတယ် ကလေးရယ်
ငါ …. အရာအားလုံး
ဟုတ်ပါတယ် … မင်းအတွက်ပေါ့ …
သန့်ရှင်းခြင်း၊ စင်ကြယ်ခြင်း ဖြူစင်ခြင်း …
မင်းစံနဲ့ မင်း ဆုံးဖြတ်တော့ကွာ
ငါ, မိုက်မဲခြင်းလို့ ယူဆတဲ့
မင်းဆီက ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်ခဲ့
မင်း …. ပျော်ပါ၊ ကြည်နှုးပါ၊ စိတ်ချမ်းမြေ့ပါ …
ငါ, ကျေနပ်နေမယ် …
စွဲစွဲမြဲမြဲ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့မင်းကို …
ငါလေ … ငါ
သောကတွေ မပေးချင်တော့ဘူးကွယ် …။
၃၁၊ သြဂုတ်လ၊ ၀၈ (၁၅း၃၀) မိနစ်
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ3း:27 PM2ထင်မြင်ချက်(များ)
ကျနော့ရဲ့ online ညီမတွေဖြစ်တဲ့ နန္ဒာ နဲ့ သန္တာ ဆိုတဲ့ ညီမ (၂) ယောက် စိတ်ညစ်နေတုန်းက ရေးပေးဖူးတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ဖတ်ကြည့်၊ ခံစားပေးပေါ့ဗျာ ....။
La vie n'est pas en rose.*
“ဘ၀ဟာ ပန်းခင်းလမ်းမဟုတ်ဖူး” တဲ့
ခင်းထားတဲ့ ပန်းရနံ့ကို မခံနိုင်လို့
ပန်းရနံ့ကို ခံနိုင်မှာပေါ့ ...။
* ပြင်သစ် စကားပုံလေးပါ။
၁၈၊ ဇွန်လ၊ ၀၈ (၁၈း၀၂)မိနစ်
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား2:17 PM 1 ထင်မြင်ချက်(များ)
ကျနော် အထက်တန်းကျောင်းသားတုန်းက ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရှိတယ်။ တနေ့ သူ့ဆီကနေ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရတယ်။ ကျနော် ကြိုက်လွန်းအားကြီးလို့ သိမ်းထားပါရစေဆိုပြီး တောင်းထားတာ အခုဆိုရင် အဲဒီ ကဗျာလေးရဲ့သက်တမ်းဟာ (၁၄)နှစ်လောက် ရှိတော့မယ် :) ဟောင်းနေပေမယ့် ကောင်းနေဆဲပါ အဟဲ ...။ အဲဒီထဲမှာ တစ်ပိုဒ်ကိုတော့ ခေတ်နဲ့ညီအောင် ကျနော်ပြင်ထားတယ်။ တခါက အဲဒီသူငယ်ချင်းနဲ့ ပြန်ဆုံတော့ ခွင့်တောင်းလိုက်ပါသေးတယ်။ “သူငယ်ချင်းတဲ့ ... အခုထိ မှတ်မှတ်ရရ သိမ်းထားတာကိုက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။ ဘ၀အမောမှာ ရေစုန်မျှောနေတော့ ကဗျာဆိုတာ ငါ့အတွက်တော့ ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ လမ်းကလေးတခုအဖြစ်နဲ့ပဲ ကျန်ခဲ့ပြီတဲ့.....။ မင်း ကြိုက်သလိုပြင်ပြီး၊ အသုံးပြုပါ”ဆိုတာနဲ့ ကျနော့ဘလော့ဂ်မှ အဲဒီ သူငယ်ချင်းအတွက် အမှတ်တရ အနေနဲ့ တင်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီလို အစချီထားပေမယ့် ကဗျာလေးက .... (အင်း) ဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာ ...။
ကျနော် အောက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်းမျိုးရှိသော မိန်းမလှလေးတစ်ယောက် အလိုရှိနေပါသ၍ အရည်အချင်း ပြည့်မီသူများ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သဘောကောင်းသူ ဖြစ်ရမည် ...။
တိုက်ကြီးကြီးလည်း ရှိရမည် ...။
ဟိုနား ဒီနား ခရီးသွား
ကိုယ်ပိုင်ကားလည်း ရှိရမည် ...။
ဟိုဆက် ဒီဆက် ဖီလင်တက်မယ့်
ဟန်းဖုံးလေးလည်း ရှိရမည် ...။
ကိုယ်၏ ဆန္ဒ လိုသမျှ
ခေါင်းငြိမ့်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည် ...။
ကျွန်တော် စဉ်းစား ပေးနိုင်မည် ...။
အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀သို့ အမှတ်တယ ပြန်လည်တမ်းတမိလျှက် ... ကိုရုပ်ဆိုး
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား1:07 PM5ထင်မြင်ချက်(များ)
အညွှန်း : သူငယ်ချင်း, အကြိုက်ဆုံးကဗျာ
ညီမငယ် တစ်ယောက်ကို ရေးပေးဖူးတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ စာအုပ်တွေရှင်းရင်း အကြမ်းခြစ်ထားတဲ့ စာရွက်အပိုင်းအစလေးတွေ့တာနဲ့ ဘလော့ဂ်ပေါ် တင်ချင်စိတ်လေးဖြစ်လာလို့။ အဆုံးသတ်အပိုင်းလေးကို မတွေ့တော့ နည်းနည်းစဉ်းစားပြီးတော့ အဆုံးသတ်ထားတယ်။ အသက်ကြီးလာတော့ ဦးဏှောက်က သိပ်မကောင်းချင်တော့ဘူး။ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ကဗျာကိုတောင် စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး ... ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လဲ .... ပြန်ပြင်ပြီး ဆုံးအောင် ရေးပေးလိုက်တယ် ...။ ခေါင်းစဉ်လည်း မရှိပါဘူး .... အဲဒီ ညီမငယ်ရဲ့ မှတ်တမ်းစာအုပ်လေးမှာ ရေးပေးဖြစ်တာလေးပါ ...။ သူ့ဆီမှာလည်း အခုလောက်ဆို မရှိတော့လောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့ ... :(
........၊ အစ ၊.........
စာလုံး နှစ်လုံး ထဲပါ
ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ ရှုပ်တယ် ...။
.......၊ အခြေအနေ ၊.......
.......၊ အင်အား ၊.......
ရင်ဆိုင် ၀ံ့တာကော၊ မ၀ံ့တာကော
.......၊ လူတွေ ၊.......
.........၊ စိတ် ၊.......
........၊ ဆန္ဒ ၊.........
........၊ မျက်ရည် ၊.......
........၊ ပေါက်ကွဲမှု ၊........
ဓားစာခံ ဖြစ်ဖူးမှာပဲ ...။
........၊ ခရီးလမ်း ၊......
လျှောက်ခဲ့ဖူး၊ လျှောက်ရဦးမှာပဲ ...။
၂၈ သြဂုတ်လ၊ ၀၈ (၁၆း၁၅)မိနစ်
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ3း:48 PM4ထင်မြင်ချက်(များ)
မောင်ရုပ်ဆိုး နှင့် အင်တာဗျူး (သို့) ဘလော့ဂ်များ၌ စွဲလမ်းခြင်း
မနေ့ညက ကျနော် အရှင်လတ်လတ် နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဗျ။ ကျနော့ဘေးနားမှာလည်း ကောင်မလေး ချောချောလေးတွေ အို…. များတာမှ ဘယ်လိုများသလဲဆိုတော့ အထည်ချုပ်စက်ရုံထဲ ရောက်သွားသလို၊ ဆေးလိပ်ခုံထဲ ရောက်သွားသလို၊ မိန်းကလေးကျောင်းထဲ ရောက်သွားသလို …. အဲဒီလိုကို …. မချောအများ ကိုယ်အခန့်သား ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ ။
သူတို့ဆီက ရနံ့လေးတွေကလည်း မေမြို့ ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ် (ယ္ခု ကန်တော်ကြီး အမျိုးသားဥယျာဉ်) ထဲရောက်သွားသလို၊ ပြင်သစ်ပြည်ကရေမွှေးနန်းတော်ထဲပဲ ရောက်သွားသလို၊ ညဈေးတန်းက ပန်းသေးခေါက်ဆွဲဆိုင်ပဲ ရောက်သွားသလို … မွှေးချက်ဗျာ … လွန်ရော….။
မီးရောင်တွေ တထိန်ထိန်၊ ဓါတ်ပုံတွေ တဖျပ်ဖျပ်နဲ့၊ ၀ိုင်းလာလိုက်တဲ့ သတင်းထောက်တွေကိုလည်း ကာရံပေးနေတဲ့ ကိုယ်ရံတော်တွေကအပြည့်၊ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်ဆိုရင် မဟုတ်သေးပါဘူးဟ ဆိုပြီး ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်ပြန်ဆိတ်ကြည့်တော့မှ အားလားလားးးးးးးးးး အိပ်မက်ကိုးဗျ။ ဘယ်ရမလဲ ဒီလို အိပ်မက်မျိုးတော့ ဘယ်အလွတ်ခံနိုင်မလဲ။ ဇွတ်ကြိတ်မှိတ်ပြီးတော့ကို ဆက်မက်တာ။
လာပြီ … လာပြီ …။
မရွှေချောတစ်ယောက် …. မတ်ခွက်ကြီးကိုင်လို့ (အဲလေ) မိုက်ခွက်ကြီးကိုင်လို့။ “ကိုရုပ်ဆိုး” ကို ဗျူးချင်လို့ပါ ရှင်တဲ့….
ကျနော်ကလည်း ဘာရမလဲ …. ဗျူးပါဗျာ … ဗျူးပါ … အဗျူးခံချင်နေတာကြာလှပြီပေါ့ ….။
ဒါပေမယ့် စပြောကတည်းကိုက တလွဲ … ကိုရုပ်ဆိုးက ရုပ်အရမ်းဆိုးတယ်နော်တဲ့။ သွား, နင် ငါ့အနားမလာနဲ့ သွား … အော်ငေါက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဘယ်ရမလဲ။ ဒီလို ဒဲ့ဒိုးကြီးပြောတာတော့ ဘယ်ခံလိမ့်မတုန်း။
ဟော … လာပြန်ပြီ နောက် မချော တစ်ယောက်။ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဘေးနားက အချစ်ကလေးတွေနဲ့ ရီဖြဲဖြဲ လုပ်နေလိုက်တာပေါ့။
သူလေးက စကားစလာတယ် …. ကိုရုပ်ဆိုး ဆိုလို့၊ ရုပ်ဆိုးလိမ့်မယ်ထင်နေတာ။ ဒို့ အကိုက ခန့်ချောကြီးနော်တဲ့။ အင်း … ဒီကောင်မလေး လူမှုရေးမဆိုးဘူးဟ။ အလိုက်သိတယ်။ အဗျူးခံလိုက်မှ ….
အကို … ဘယ်သူ့ ၀တ္ထုတွေ အဖတ်များလည်းတဲ့ …။ နိုကိုဥဇူးဇင်လား …၊ စောပြည့်အာပလာ လားတဲ့။
အို မဟုတ်တာ …. အကိုက ရွှေပြည်သူရဲ့ ၀တ္ထုတွေပဲဖတ်တာလို့။
ထပ်မေးသေးတယ် ….။ အကို … ဘယ်အကောင်လေးတွေကို အချစ်ဆုံးလည်းတဲ့ …။ ယုံလေးတွေလား၊ ပူးလေးတွေလား၊ ဟံဆာလေးတွေလားတဲ့။
အို မဟုတ်တာ … အကိုက “ဇင်ယော်”လေးပဲ ချစ်တာလို့။
ဒါဆို … အကို အခုလို အောင်မြင်နေတာကော ဘယ်သု့ ဒဿနတွေကို မှီငြမ်းလို့လည်းတဲ့ …။ ဒေးကာနက်ဂျီလား …၊ ဖေမြင့်လား တဲ့…
အို မဟုတ်တာ … အကိုက ရီပါတ်ဗလစ် ရဲ့ ဒဿနတွေကို မှီငြမ်းတာလို့။
သူလေးက စကားကြော ဒီလိုရှည်သေးတယ် …. အကို ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါ ဘယ်ဒါရိုက်တာ ကားတွေကို အကြည့်အများဆုံးလည်းတဲ့ … မီးပွားရဲ့ ရိုက်ချက်လား … ၊ စတီဗင် ဆာလာဖတ်လား တဲ့။
အို မဟုတ်တာ … မောင်မျိုး ရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ်လေးတွေကိုပဲ ကြည့်တာလို့ …
အထွန့်တက်သေးတယ် ဒီလိုလေ … ဘယ် ရာသီဥတုကို အကြိုက်ဆုံးလည်းတဲ့ … နွေဦးလား၊ လေရူးလား၊ ဆောင်းဦးရွက်ကြွေ ချစ်သက်သေလားတဲ့ ….
အို မဟုတ်တာ … မေ လ မှာ ရွာတဲ့ မိုး လို့ ဒါမှမဟုတ်ရင် နှင်းစက်မိုး လို့…. ရဲရဲကြီးပေါ့ ဖြေလိုက်တယ်။
ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ အကိုအကြိုက်ဆုံးကတဲ့ …. ပီဇာလား၊ နီနာလား၊ ပလီပလာ လားတဲ့ ….
အို မဟုတ်တာ … စိတ်ကူးကမ္ဘာလေး ပါ …
နောက်ပြီးတော့လေ … သူမက လေရှည်သေးတယ် … ရသ တွေထဲမှာ ဘယ်ရသကို အကြိုက်ဆုံးလည်းတဲ့ … ၀ီရ လား …၊ ဟာသ လား၊ ဘယ လား .... တဲ့
အို မဟုတ်တာ … ဓမ္မရသ ကို အနှစ်သက်ဆုံးပါကွယ် လို့ …
နောက်ဆုံးတစ်ခွန်းမေးမယ်နော်တဲ့ … ဟတ်ကဲ့လို့ ဖြေသံမဆုံးသေးဘူး ….
အကိုက ဘယ်လို လူနေမှုပုံစံကို အကြိုက်ဆုံးလည်းတဲ့ … မြို့သားစတိုင်လား၊ ဂြိုလ်သားစတိုင်လား …
အို မဟုတ်တာ … အကိုက ရွာသားလေး စတိုင်ကို အခိုက်ဆုံးပဲလို့၊ ကျွဲကျောင်း၊ နွားကျောင်း၊ မိန်းကလေးကျောင်းရင်း … ရင်း လေရှုရတာလို့၊ အကိုက ဗီလစ်ဂျား စတိုင်လို့ ...
တလက်စတည်းပါတဲ့ YTU ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိသလားတဲ့ .. You are Truly Understandable လားတဲ့
အို မဟုတ်တာ … သိတာပေါ့ You are Truly Ugly လို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်နေတုန်း …
“မောင်”ရေတဲ့ ထတော့တဲ့၊ ထမင်းအိုးလေး ထ တည်လိုက်ပါအုံး၊ သမီးအကြီးအတွက် ထမင်းချိုင့်၊ သားငယ်နိုးလာရင် စားဖို့အတွက်၊ ကျနော် မသွားခင် စားသွားဖို့အတွက်ဆိုပြီး ရှုမငြီးတဲ့ ချစ်ဇနီးလေး နှိုးလိုက်တာနဲ့ပဲ …. နေ့တနေ့ကို ရုန်းကန်ဖို့ အမှန်အကန် မောင်ရုပ်ဆိုး အိပ်ယာထက်မှ ကုန်းရုန်းနိုးထလိုက်လေတော့သတည်း ….. အဟီး ဟီး
*** ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ စိတ်ကူးပေါက်ပေါက်နဲ့ ရေးထည့်လိုက်တဲ့ ဟာလေးပါ။ ဘလော့ဂ်ဂါ ညီအကို၊ မောင်နှမ များ ပြုံးပျော် ကြည်နှုးနိုင်ကြပါစေ .... လွန်တာရှိ ၀န္တာမိ၊ မပါသေးသူများ စိတ်မဆိုးကြေး ...
၂၂ ရက်၊ သြဂုတ်လ၊ ၀၈ (၁၇း၄၅)မိနစ်
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား5:49 PM 11 ထင်မြင်ချက်(များ)
အင်း ... အခုတလော ကိုယ်ကလည်း ပို့စ်အသစ်မတင်နိုင်တော့။ လာဖတ်သူတွေ အလာကျဲသွားတာကို သတိထားမိတယ် :(
ဒီလိုတော့ ဘယ်ရမလဲ ...။ ပရိုမိုးရှင်းဆိုတာကြီး ရှိသေးတာပဲ ....။
အဲဒီတော့ ကိုရုပ်ဆိုးရဲ့ ဒိုင်ယာရီကို လာလှန်တဲ့ (ဒိုင်ယာရီပဲနော်...:) လူတိုင်းအတွက် လက်ဆောင်ပေးမယ်။
အောက်က လင့်ခ် ကလေးကိုသာ နှိပ်ပြီး သွားရောက်ယူလိုက်ကြပါဗျာ ....။
ဟော့ဒီမှာ ၂၄ ရက်၊ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၀၈။ ညနေ (၅)နာရီ သုဝဏ္ဏကွင်း မိုးလုံလေလုံမှာ ကျင်းပမည့် IC ရဲ့ လေးဖြူပါဝင်လာတဲ့ နာဂါစ်ဒုက္ခသည်များအတွက် ရံပုံငွေ Stage Show လက်မှတ် ...။ လိုသလောက် ယူ။ ကြိုက်သလို သွားတာကဲ။ ကိုရုပ်ဆိုးကို အဲဒီမှာ တွေ့ရင် .... လက်မပြကြေး၊ မပြုံးပြရကြေး၊ ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်မတင်ကြေး............။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ3း:29 PM0ထင်မြင်ချက်(များ)
ဘယ်လိုလဲ ဘလော့ဂ်ဂါ သူငယ်ချင်းများ ....
ကျနော်ရဲ့ “ထန်း”အကြောင်း မြန်မာဝီကီမှာ ဖတ်ပြီး ထန်းရည်သောက်ချင်နေပြီလား။ ကျနော်ကတော့ တင်နေတုန်းမှာ တ၀သောက်လိုက်လို့ ရီဝေေ၀ (ရီဝေယံ) မဟုတ် (ရီဝေရမ်း)လည်းမဟုတ်။
အခု နောက်ထပ် “၀ါး”ဆိုတာ တင်ထားသေးတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ အိမ်တွေသွားဆောက်ပေးရင်းနဲ့ ၀ါးအကြောင်း အတော်အတန်သိလာသလို၊ ကိုယ့်မှာကလည်း စာပေဗိမာန် စာမူဆုရထားတဲ့ “မြန်မာ့ဝါး”စာအုပ် ရှိနေတာနဲ့ တင်လိုက်တာ။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ၀ါး (၁)မျိုးစီရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကို ထပ်တင်အုံးမှာ။ အချိန်နည်းနည်းတော့ ပေးပါဗျာ။ တဖက်ကိုဘဲ မည်းနေရင် ဘလော့ဂ်ဂါသူငယ်ချင်းတွေက ကျနော့ဘလော့ဂ်ကို အလာကျဲသွားမှာလည်း စိုးရိမ်တယ် ... ဟဲ ဟဲ ... အသစ်မတင်လည်း သူငယ်ချင်းတွေက လာလည်မြဲပါ ... ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
အောက်မှာ လင့်ခ် လေး ပေးလိုက်တယ်။ လိုအပ်တာရှိရင် အကြံပေးကြပါအုံး။
၀ါး (သို့မဟုတ်) ၀ါးပင်
ဒါက နောက်တစ်ပုဒ် ....
“ ............... ရ”
မင်း, ဘယ်မှာနေလဲ ?
မင်း, ဘယ်သူလဲ ?
မင်း, နာမည်ဘယ်လိုလဲ ?
မင်း, ........... လား ?
*** အမှတ်မထင်မြင်လိုက်ရတဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ခပ်ချောချော ကောင်မလေးတစ်ယောက်သို့ ....
(၁၄ သြဂုတ်လ၊ ၀၈) ၁၃း၁၀ မိနစ်
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား12:57 PM2ထင်မြင်ချက်(များ)
ဒီမနက် လိုင်းကားစီးရင်း .... “ခါးပိုက်နှိုက် သတိပြု”ဆိုတဲ့ သတိပေးဆောင်ပုဒ်လေးကို ဖတ်ရင်း .... အိုင်ဒီယာ ရလာတာပါ။ :) :P :D
မင်းမှ မသိသေးတာ ...။
(၁၄ သြဂုတ်လ၊ ၀၈) ၁၂း၂၅ မိနစ်
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား12:41 PM3ထင်မြင်ချက်(များ)
ကျနော် ဒီနေ့မနက်ပဲ မြန်မာဝီကီမှာ ထန်းပင် နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကို အစမ်းသဘော တင်ထားတယ်။ Blog တစ်ခု ရေးရတာထက်စာရင် နည်းနည်းရှုပ်တယ်။ တချို့ internal link တွေဆို ဘယ်လို လုပ်ရမလဲတောင် မသိသေးဘူး။ မချိတ်မိဘူး ဖြစ်နေတာ။ Content ကိုလည်း သူတို့ဘာသာ လုပ်ပေးမှာလား၊ ကိုယ်ကိုတိုင် လုပ်ရမှာလား မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဒီမှာ သွားလည်ကြည့်ပြီး လိုအပ်တာများရှိရင် ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ကြပါလို့ ဘလော့ဂ်ဂါ သူငယ်ချင်းများထံ အပူကပ်ပါရစေ။
၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ စာပေဗိမာန်မှ ချီးမြှင့်တဲ့ သုတပဒေသာ - (၀ိဇ္ဇာပညာရပ်) စာမူဆုရ တဲ့ မောင်လင်းသူ (ညောင်ဦး) စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာလေးတွေကို အကျဉ်းခြုံး တင်ပြထားတာပါ။
နောက်ထပ် ထန်းလျက်ကျိုချက်ခြင်း၊ ထန်း ဖို မ ခွဲနည်း၊ ထန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ၊ ထန်းအပိုပစ္စည်းများ အသုံးဝင်ပုံ စတာတွေကို တဖြည်းဖြည်း တင်ပေးမှာဗျ။ စောင့်မျှော်ပေးကြပါအုံး။
မင်း မုန်းချင်မုန်းလေ ...
ငါ, သေချာကြည်လင်စွာ သိတယ်...
မင်း ပုန်းချင်ပုန်းလေ ...
မင်းကို ငါ တွေ့အောင်ရှာနိုင်တယ် ...
မင်း ဘယ်နေရာမှာပဲ နေနေ
ငါ ဘယ်နေရာမှာပဲ ရှိရှိ
မရပ်မနား ခုန်တတ်သာဆိုတော့ ...
(၁၂ သြဂုတ်လ၊ ၀၈) ၁၉း၀၅ မိနစ်
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား7:01 PM3ထင်မြင်ချက်(များ)
ကျနော်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းများကို တစ်ခုလောက်ပြောချင်တာက ကျနော် ပါဠိ - မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်ဘလော့ဂ်လေး တစ်ခု တည်ဆောက်ထားတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် link လေးပေးချင်လို့ပါ။
တည်ဆောက်ဆဲကာလဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက် နားလည်ပေးပါအုံး။ တစ်ဝက်တော့ ကျိုးသွားပါပြီ။
(၁) http://buddhist-terminology.co.cc နဲ့
(၂) http://buddhist-terms.blogspot.com ဆိုပြီး (၂) ခုလုပ်ထားတယ်။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ6း:56 PM0ထင်မြင်ချက်(များ)
မင်္ဂလာရှိသော နေ့လည်ခင်းပါ သူငယ်ချင်းများ ....
ဒီနေ့မနက် ကျန်ရှိနေတဲ့ email အကြွေးတွေဖတ်ရင်း forward လုပ်ထားတဲ့ email ကနေ ဖတ်မိတဲ့ပို့စ်လေးတစ်ခုကို သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်ကတော့ ဒီအချိန်မှာ ဘလော့ဂ်တွေလည်လိုက် ဖတ်ကောင်းရင် ဝေမျှလိုက်ဆိုတဲ့ ကိစ္စလေးတစ်ခုပဲ လုပ်နိုင်လို့ပါ :)
မင်းသစ္စာရဲ့ မင်းသစ္စာ ဆိုတဲ့ blog က ပို့စ်လေးတစ်ခုပါ။ “ပုခက်လွှဲသောလက်သို့ပေးစာ” တဲ့။ မူရင်း ဘလော့ဂ်သို့ အလည်သွားရင်းဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်။ သူ့ရဲ့ တခြားလက်ရာလေးတွေကိုလည်း ခံစားလို့ရတာပေါ့။
အကြောင်းအရာကဏ္ဍပေါင်းစုံကို ဖတ်ရမယ့်အပြင် အခြားဗဟုသုတရစရာ၊ သိသင့်စရာလေးတွေကိုလည်း ဖတ်ရမှာပါ။ အမှတ်မထင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်းကားနောက်ခံသီချင်းကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုပုံလေးတွေက တက်ကြွစရာပါ။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား12:29 PM0ထင်မြင်ချက်(များ)
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက ရထားတဲ့ ဟာသလေးပါ။ အားလုံးကို ဝေမျှချင်တာနဲ့ တင်လိုက်တာ။ စိတ်နှလုံး ရွှင်ပြုံး နိုင်ကြပါစေ။
အင်း လူပျိုကြီးများခမျာ ... ရင်လောက်တင်မှ ဒူးလောက်ကျမှာဆိုတော့လည်း ....
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား12:14 PM 1 ထင်မြင်ချက်(များ)
ဘလော့ဂ်ဂါ သူငယ်ချင်းများသို့ .....
ကျနော်ကိုယ်တိုင် မရောက်ဖြစ်တာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ကျနော့ ဘလော့ဂ်လေးကို လာလည်ကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။
ရုံးတွင်းအလုပ်မရှုပ်ဘဲ၊ ပြင်ပအလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့ ကိုယ့်ဘလော့ကို ကိုယ်တိုင် မှန်မှန်မရောက်နိုင်၊ ပို့စ်အသစ်လည်း မတင်နိုင်ဖြစ်နေတာ။
ဒီနေ့တော့ အချိန်ရတာနဲ့ ကျနော်တို့ တည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ ကွန်ဒိုင်းရွာလေးက တဲပုံလေးတွေ ကျနော်သူငယ်ချင်းတွေ ဝေမျှခံစားလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။
ဒီတပါတ်လည်း အဲဒီရွာကို သွားရအုံးမှာ။ အိမ်သာကိစ္စ၊ သောက်ရေကန်ကိစ္စ၊ ကျောင်းကိစ္စ (ကျောင်းက မူလတန်းကျောင်းလျှောက်လို့ရအောင် ခပ်ကြီးကြီး ဆောက်မှာဆိုတော့ကြာနေတာ။)
မူလတန်းပြဆရာမလည်း အစိုးရဆီမှာ လျှောက်မယ်။ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ဗျာ...။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား5:34 PM3ထင်မြင်ချက်(များ)